TCN Australia oo ah mashiinnada iibinta iibka - TCN
TCN Australia oo ku taal mashiinka iibinta
Waqtiga: 2018-09-17 Hits:
Dadku way yimaadaan oo waxay aadaan goobta lagu soo bandhigo.
Kooxda TCN way wada shaqeeyaan
Bandhiggan, ayaa muujinaya TCNed Moodeelka ugu weyn ee TCN-D720-10G, D720-6G iyo mashiinnada iibinta waxqabadka sare leh waayo, users, oo leh xallin tayo sare leh si loo muujiyo soo jiidashada TCN ee laga sameeyay Shiinaha macaamiisha adduunka!
TCN-D720-6G mashiinka wax iibinta ee caqliga leh, qaab fudud oo qaab casri ah oo warshadeed madow ah, oo hogaaminaya jiilka cusub ee mashiinada iibinta bilicda. Waxay iibin kartaa noocyo fara badan oo ah dhalo / qasacadaysan / cabitaan, sanduuq caano ah iyo noocyo kala duwan oo noocyo fudud oo bagged ah / baakado ka sameysan, baastada degdega ah iyo cuntooyinka kale ee ku habboon.
Bandhiga mashiinka iibinta ee Australiyaanka 2018
Waxaan kula kulannaa, isku dhaca, wada xiriirnaa, wada shaqeyn laheyn halkan.
Had iyo jeer mid baa kuu jira!
Iyada oo ay la socdaan badeecado iyo adeegyo heer sare ah oo ka caawinaya macaamiisha inay koraan!
HOREMarka mashiinka wax iibintu soo galaan weelka wax lagu cuno?
NEXT Mashiinka iibinta caanaha, hirarka cusub ee tafaariiqda ee fursadaha wanaagsan!